Ulutyikitya njani uxwebhu nge-Mac Preview | Ndisuka mac
Ulutyikitya njani uxwebhu ngokujonga kuqala iMac
URuben inyongo | | Tutorials
Ngokuqinisekileyo, ngaphezulu kwesihlandlo esinye, oku kwenzekileyo kuwe: ifomu, uxwebhu okanye ikhontrakthi ithunyelwe kuwe nge-imeyile ekufuneka ubuyise isayinwe. Eyona nto ixhaphakileyo kukuba siqhubeke nokuprinta uxwebhu ekubhekiswa kulo kwaye siluskene emva koko siluthumele kwakhona kunye notyikityo lwethu. Kodwa, ngaba uyazi ukuba ungayenza ngokwamanani ngaphandle kwamanyathelo amaninzi abandakanyekayo? Uyakwazo oko isicelo sokujonga kuqala kwi-Mac yakho siya kukuvumela ukuba ufake utyikityo lwakho kumaxwebhu ngeendlela ezimbini?
Kuninzi okuthethwa malunga nokusetyenziswa kweselfowuni esivumela ukuba sisayine ngqo, kwiscreen, amaxwebhu aza kuthi kwi-iPhone okanye kwi-iPad. Nangona kunjalo, ukuba konke oku kuyenzeka ekhaya, phambi kwekhompyuter, kuya kubakho ngamanyathelo ambalwa alula. Ngaphezulu, eyona ilungileyo kuko konke oko ungagcina eso siginitsha senziwe ngekhompyutha kumaxwebhu exesha elizayo. Makhe sijonge kumanyathelo okusayina iPDF ngokujonga kwangaphambili kweMac.
Into yokuqala ekufuneka uyenzile kukukhuphela uxwebhu olunombuzo ekuhlaleni; Oko kukuthi, yisingatha kwi-hard drive yakho. Nje ukuba ukhutshelwe, cofa kuyo ngeqhosha lasekunene le-mouse -okanye ctrl + trackpad-Uyivule ngePreview. Into yesibini ekufuneka uyenzile kukukwenza konke ukusebenza kwebar yenkqubo. Kwaye oku kufuneka kwenziwe kwi "Jonga" icandelo leMenyu yokujonga kuqala ibha. Nje ukuba ngaphakathi ujonge ukhetho "Bonisa isixwexwe sezixhobo zokusebenza". Uya kubona ukuba ngequbuliso ezinye iinketho ziyavela emfanekisweni okanye kuxwebhu.
Iya kuba lixesha lokuba uqalise ukuqhuba iirubrikhi zethu; Kuya kufuneka uye kwi icon ngohlobo lwe-doodle - yesithandathu ukusuka ekhohlo- kwaye ucofe kuyo. Okwangoku iwindow entsha izakuvula phi ungakhetha ukuba uyakutyikitya utyikityo usebenzisa iphedi yokulandelela -Ukuba awunayo i-pulse, ayisiyiyo eyona ndlela iphambili- okanye Sebenzisa ikhamera ye-Mac. Kule ndlela yesibini kufuneka wenze utyikityo lwakho kwiphepha elingenanto kunye nepeni emnyama yeinki.
Emva koko umi phambi kwekhamera ye-Mac; utyikityo lungaphezulu komgca oluhlaza okwesibhakabhaka ovela efestileni. Emva kokufaka yonke into ephambi kwekhamera, kuya kufuneka ucofe naliphi na iqhosha lokwamkela utyikityo. Ukusukela ngoko ukuya phambili, ungawugcina umsayino kuwo onke amaxwebhu exesha elizayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Tutorials » Ulutyikitya njani uxwebhu ngokujonga kuqala iMac
UBoxy, umxhasi we-imeyile okhethekileyo weGmail, yasimahla ixesha elilinganiselweyo
USiri kwiApple Watch: iingxaki zokucela imozulu yanamhlanje